China Cas 96-48-0 GBL China bhizimisi gamma-Butyrolactone fekitari uye bhizimisi | Minshang
Imwe yeFURANS ine carbonyl nokudaro inogadzira cyclic lactone. Icho chinogadziriswa chinogadzirwa kubva kugamma-aminobutyrate uye ndiyo inotungamira gamma-hydroxybutyrate. Iyo zvakare inoshandiswa seyemishonga yemumiriri uye solvent.
204.0 ± 0.0 ° C pa760 mmHg
-45 ° C (yakavhenekerwa.)
3 (vs mhepo)
0.3 ± 0.4 mmHg pa25 ° C
Muchitevere. Hygroscopic. Inoenderana neakasimba oxidizing vamiririri, yakasimba acids, yakasimba mabheseni, akasimba ekuderedza vamiririri.
Pasi pemamiriro eacidic inoumba musanganiswa weuenzanisi wemakomponi maviri aya. Izvi zvinosanganiswa zvino zvinogona kuenderera mberi kugadzira polymer. Kana ichirapwa isina-nucleophilic base, se lithiamu diisopropylamide, Butyrolactone inogona kuve alpha-kabhoni nucleophile. Iyo inoenderana mukomboni caprolactone inogona kushandiswa kugadzira polyester nenzira iyi.
Butyrolactone haisi kushandira pachayo; mashandiro ayo ekuita anobva mukuzivikanwa kwayo seye prodrug ye.
Iyo hypnotic mhedzisiro yeinowedzerwa nekubatanidzwa nedoro. Ongororo yegore ra2003 yakaratidza kuti Butyrolactone mukubatana neethanol yakaratidza kugona kutapudza, sezvo chiyero chenguva yekurara chaive chakareba kupfuura zvese zviri zviviri zvakasanganiswa.
Butyrolactone imvura isina chepfu yakajeka mune chimiro chemafuta. Inogona kusanganiswa nemvura ikanyungudika ne ethanol ether, benzene uye acetone. Inogona kuputsa akawanda mamwe manyowa uye inorganic remubatanidzwa. Kushandisa Butyrolactone kwakachengeteka uye kuri nyore, nekuti irwo mvura ine yakanyanya kufashaira, ine simba solvency, yakanaka magetsi uye kugadzikana zvivakwa. Butyrolactone yakakosha ye organic synthetic mbishi zvinhu uye yakanaka solvent. Inonyanya kushandiswa seyakagadzirwa pyrolidone akateedzana zvigadzirwa cyclopropylamine acetyl-r-butyrolactone, kunze kweizvi, Butyrolactone inoshandiswawo senge solvent yemakemikari ekurima, polymer, dyestuff uye kudhinda. Tichishandisa butyrolactone senge mbishi zvinhu, tinogona kugadzira zvinonhuwirira makemikari, ekurapa epakati uye ngura inobvisa.
Kuwedzera kujekesa kwepfungwa.
Kurerutsa kushushikana uye kushushikana.
Kuvandudza kuita kwepabonde uye mafaro.
Kuvandudza mashandiro emitambo.
Semuvaki-muviri kana mhasuru-inovaka.
1) Inogona kushandiswa kugadzira pyrrolidone zvigadzirwa;
2) Inogona kushandiswa seyemishonga iri pakati, seCyclopropylamine uye vhitamini;
3) Inogona kushandiswa semushonga wezvipembenene wepakati, senge herbicide uye chirimwa chekukura chinodzora;
4) Inogona kushandiswa kune alkenes, alkynes yekubvisa mumiriri, inopinza uye inoparadzira mumiririri;
5) Inogona kushandiswa kugadzira resin seye antioxidant, plasticizer, muchiaparadzira mumiriri, kugadzirisa mumiririri uye solvent;
6) Inogona kushandiswa synthesize faibha kutenderera solvent, coagulant, värjäys mubatsiri uye antistatic mumiriri;
7) Inogona kushandiswa seyakatsvuka zvinhu zvevaravara firimu raimbove, electrolyte, capacitor neingi girisi
Isu tinotengesa zvemhando yepamusoro
Nyowani bmk CAS: 1451-82-7
Pashure: Cas 102-97-6 Benzylisopropylamine isopropylbenzylamine
Zvadaro: Cas 62-44-2 Phenacetin China fekitori
Dexmedetomidine cas113775-47-6 rutsigiro sampuro a ...
Benzocaine Powder CAS 94-09-7 ine Best Mutengo